Ọganihu ọhụrụ maka Ecommerce na DHL Parcel | ECommerce ozi ọma
Ọganihu ọhụrụ maka Ecommerce na DHL Parcel
Azụmahịa elektrọn etinyego onwe ya n'afọ ndị a dịka otu n'ime zụta ụzọ ndị ọzọ eji site na ndị ọrụ Internetntanetị. A na-atụ anya ECommerce ka ọ bụrụ isi ụlọ ahịa, dị ka ọtụtụ ma ọ bụ karịa karịa ahia maka ụlọ ahịa anụ ahụ na mgba ọ na-agba iji kwado oke ahịa dị mkpa n ’ihu ọganihu na-enweghị ike ịkwụsị nke azụmaahịa 100% dị n'ịntanetị.
Agbanyeghị na e-commerce na-etolite kwa afọ na Spain, ọ bụ eziokwu na ọ kabeghị ọkwa nke mba ndị ọzọ dịka United Kingdom, ebe enwere ọrụ nke karịrị ijeri euro 100. Tupu nke a ngwa ngwa nke e-azụmahịa, online echekwa ga-ebuli ha usoro iji zere ịju afọ n'oge ụfọdụ n'afọ.
Yabụ, ịnye ịdị irè na mbupu ngwaahịa yana ịnwe ndị mmekọ nwere ike ịbute ndị na-azụ ahịa na mpaghara na mba ụwa, bụ ihe na-aghọ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị ezigbo mkpa. ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Ya mere, ọ dị mkpa iji kpochapụ ụdị mgbochi niile na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịnapụta ngwaahịa ka mma. Mmelite na nke a ga-ekwe belata ọnụ ọgụgụ nke ihe omume na ihe onwunwe, na ngwugwu na e-commerce ụlọ ọrụ ga-etinye ego.
DHL ngwugwu ọrụ na nka
Ọ bụ ya mere DHL ngwugwu ala na Spain na echiche a: gbasaa nhọrọ nnyefe iji mee ka ha zie ezi, dị mma maka ndị na-azụ ahịa na-enweghị mgbalị nke abụọ. Iji mezuo nke a, ụlọ ọrụ German na-etinyekarị aka na echiche abụọ.
Nke mbụ, mụbaa nhọrọ ndị onye ahịa nwere ugbu a iji nweta nzụta gị n'ịntanetị, ka ị nwee ike ịgbanwe ụbọchị nnyefe, họta onye nnata ọzọ iji nata mbupu gị (onye agbata obi ma ọ bụ onye nlekọta) ma ọ bụ họrọ ebe nchịkọta DHL (ServicePoint)
Nke a ikpeazụ nhọrọ, na ọrụ ọrụ, na-anọchite anya ogidi nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ iji mee ka ndị mmadụ nweta ngwa ngwa dabere na ya, ebe ọ na-agba ume ịnakọta iwu na ebe edozi na ebe dị nso. Nke na-enye ohere iji kwụsie ike ma mee ngwangwa ụzọ nnyefe.
N'ihi nke a, DHL Parcel ruru Peninsula na netwọk nke Ihe nrịgo 2 dị n'etiti Spain na Portugal, na ndị ọzọ nke 54 000 ofụri Europe, nke na-enye gị ohere ịnye e-commerce ndị ahịa gị iji mejupụta iwu ha na Europe niile dịka a ga - asị na ha bụ ụlọ.
Ya mere, na mgbe ihe ịga nke ọma sitere na ụdị mbupu ụgbọ mmiri a na Europe dum, na ọkachasị na Germany (ebe mpaghara ahụ toro na gburugburu 47% n'afọ gara aga), ọ dị ka e-commerce ka malitere ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ọganihu ọhụrụ maka Ecommerce na DHL Parcel
Ebe Ecommerce Dị Ebube Maka Mmụọ Gị
Azụmahịa kọmputa na Spain